Nhau - Makomba: Ndezvipi uye tinozvidzivirira sei?
AT Zvichiri University - Missouri Chikoro cheDentistry uye Oral Hutano
Waiziva here kuti zino enamel ndicho chinhu chakaomesesa mumuviri wemunhu? Enamel ndiyo yekunze yekudzivirira yemazino edu. Hutachiona mumiromo yedu unoshandisa shuga yatinodya kugadzira asidhi iyo inogona kupfeka iyi yekudzivirira, ichiumba mhango. Kamwe enamel yaenda, haimeri zvakare. Ichi ndicho chikonzero chiremba wako wemazino uye wemazino anogara achikuudza iwe kukwesha ne fluoride mushonga wemazino uye kuchenesa pakati pemeno ako! Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve maburi uye maitiro ekuzvidzivirira pazasi.
Mhango igomba muzino rako. Mhango mudanho rekutanga inogona kuita kunge chena chena, iyo inogona kupora. Nekufamba kwenguva, ichaita senge yebaravara kana dema. Mhango dzinogona kuve diki kana hombe. Mhango dzinogona kuumbika munzvimbo zhinji, asi dzinowanzo kuumba pamusoro pemazino ako paunoruma uye pakati pemazino ako panosangana chikafu. Mhango dzisina kugadziriswa dzinogona kukonzera kushushikana, kurwadziwa, kutapukirwa, uye zvinogona kutokonzeresa kuti urasike mazino Nzira yakanakisa yekuchengeta mazino ako uye kuachengeta akagwinya kudzivirira maburi.
Chii Chinokonzera Mhango?
Meno ako anombonzwa "kusanzwisisika" mushure mekudya here? Unoona here iwe paunotsvaira uye uchikwenya uku kunzwa kunonzwika kunopera? Kana isu tisingatsvage uye kukanda mabhakitiriya uye chikafu chatinodya chinovaka uye chinoita chinhu chinonamira chinonzi plaque (plak).
Mukuswera kwezuva, mabhakitiriya anopa chikafu chatinodya. Patinodya kana kunwa shuga, mabhakitiriya ari mumiromo yedu anoishandisa kurarama nekuita asidhi. Iyi acid inogara pamazino edu uye inorwisa iyo yekunze nzvimbo yemeno edu. Nekufamba kwenguva, asidhi inopera pasi nemeno, zvichikonzera mhango.
Kuti tinzwisise kuti mhango inoumbwa sei, ngatitarise izvo zvinogadzira zino. Enamel ndiko kuvhara kwekunze kwakaoma kunodzivirira meno edu. Pasi peiyo enamel pane iyo dentin. Dentin haina kuoma senge enamel. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti maburi apararire uye akure. Pasi peiyo dentin pane pulp. Iyo pulp ndipo panogara tsinga neropa zino.
Kana mhango isina kugadziriswa, mabhakitiriya anogona kufamba kubva kuiyo enamel kuenda kune dentin uye anogona kusvika pamaspuru. Kana mabhakitiriya kubva mudumbu akapinda mumuviri, inova hutachiona.
Utachiona hwemazino hunogona kuve hwakakomba uye hunotyisidzira hupenyu kana husina kurapwa. Ona chiremba wemazino wako ipapo kana iwe ukaona chero cheanotevera:
• Kuzvimba pachiso chako kana mumuromo mako
• Kutsvuka mukati kana mukati memuromo wako
• kurwadziwa mumuromo mako
• Kuravira kusingaite mukanwa mako
Ndiani Ari Panjodzi Yemakomba?
Vana, vachiri kuyaruka, uye vakuru vanogona vese kuva panjodzi yekuwana mhango. Iwe unogona kunge uri panjodzi yekuwedzera kana iwe:
• Chikafu chinodyiwa pakati pekudya
• Idya zvekudya zvine shuga uye zvinwiwa
• Iva nehupenyu hwega uye / kana hwemhuri hwemakomba
• Ive nemazino akatsemuka kana akatsemuka
• Tora mishonga inokonzeresa kuoma mukanwa
• Wakave nemusoro wemutsipa kana wemutsipa kurapwa
Mikova Inoitiswa Sei?
Mhango dzinofanirwa kurapwa nachiremba wemazino. Chiremba wemazino akadzidziswa kuona mhango. Mhango mudanho rekutanga inogona kugadziriswa ne fluoride. Kana iyo mhango iri yakadzika, iko kungogadziriswa kungave kwachiremba wemazino kubvisa mhango uye kuzadza nzvimbo yacho nesirivheri kana chena mavara echinhu. Kana zino riine mhango hombe, rinogona kuda kurapwa kwakaomarara.
Ndingaite Sei Kuti Ndideredze Njodzi Yangu Yemakomba?
• Inwa mvura ne fluoride
• Bhurashi ne fluoride mushonga wemazino ka2 pazuva
• Gara kure nezvikafu zvine shuga uye zvinwiwa, semandi nesoda. Usasve kana kudya pavari zuva rese. Kana uchizodya kana kunwa zvinhu zvinotapira ita saizvozvo panguva dzekudya.
• Deredza zvinwiwa zvinotapira pakati pekudya
• Geza pakati pemazino ako zuva nezuva
• Shanyira chiremba wemazino nguva dzose
Zvidhindo zvinogona kuiswa pamazino ekumashure kuti zvidzivirirwe zviri nani kubva kubhakitiriya zvichikonzera matombo.